Farmaajo iyo Uhuru oo ku kulmaya Kampala | Wardoon
Home Somali News Farmaajo iyo Uhuru oo ku kulmaya Kampala
Sarkaal ka tirsan Madaxtooyada dalka Uganda oo qariyay magaciisa ayaa u sheegay wargeyska KML in Madaxweyne Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta ay ku wada hadalsiinayaan magaalada Caasimada u ah ee Kampala.
Farmaajo iyo Uhuru ayaa 12-ka bishan kaga qeyb galaya magaalada Kampala shir cusub oo loogu magac daray shirka Afrikada hadda (Africa Now Conference.), waxaana shirkaas barbar socda kulan gaar ah oo labada Hoggaamiye yeelan doonaan.
Xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ayaa meeshii ugu xumeyd gaaray 16-kii bishii hore, kaddib Kenya ay u yeeratay Safiirkeedii u joogay Soomaaliya, isla markaana ku amartay Safiirkii Soomaaliya u fadhiyay Nairobi inuu dalkiisa ku laabto, waxaana hakad ku yimid xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada dal, iyadoo ku hanjabtay dowladda Kenya inay cunaqabateyn ku soo rogeyso Soomaaliya.
Kenya ayaa ku andacooneysa inay Soomaaliya xaraashtay dhul badeedka xuduudeeda, hase ahaatee dowladda Soomaaliya ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamtay sheegashada Kenya, war saxaafadeed ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dhulka labada dal ay ku muransan yihiin ay dacwadeeda taallo Maxkamadda Hague, ayna ka war sugeyso go’aanka Maxkamadda.
Previous articleGool-hayaha Chelsea Oo Laganaaxay
Next articleDHAGEYSO:Guriga Taliyaha Ciidanka Asluubta gobolka Hiiraan oo laweeraray
DAAWO:-Sacuudiga oo ku dhaqaaqday tallaabo lagu cunaqabataynayo Turkiga